သက်ဝေ: Blog Day For Bloggers
Posted by သက်ဝေ at 11:52 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! August 31, 2013 at 11:57 PM
ပထမဆုံး...ပဲ မမ ..<3... Happy Blog Day ပါလို့... ရည်မှန်းထားတဲ့ အတိုင်း ဘလော့ထဲမှာ စာမှန်မှန် ရေးနိုင်ပါစေလို့ ....ဆန္ဒမွန်ဖြင့် ...ညီမလေး :)
ဆွေလေးမွန် September 1, 2013 at 12:00 AM
ဟုတ်တယ် ခုနောက်ပိုင်း ဘလော့ တစ်ပုဒ်ရေးတော့မယ်ဆိုရင် လက်ကမရဲတော့ ဘူး
တစ်ခုခုကြီးက controlလုပ်နေသလို ခံစားရတယ်။
ပြီးတော့ အရင်ကလို ဘလော့လောကကြီးက တက်တက်ကြွကြွမရှိတော့ပဲ အေးနေတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာတွေတော့ လည်ပြီးဖတ်ဖြစ်တယ်.
ံHAPPY BLOG DAY ပါ အစ်မ သက်ဝေ ရေ..
ATN September 1, 2013 at 12:07 AM
အစဉ်အလာ မပျက်လို့ပဲ ပြောရမလား... ညီမရေ့...
Kay Thwel September 1, 2013 at 12:10 AM
အဲဒီတုန်းက..တဘလော့ နဲ့ တဘလော့..ဟိုလူလိုလို ဒီလူလိုလို..။ မသက်ဝေ ဆိုတာကို သိသလိုလို ဖြစ်နေတုန်း ၊ သူပဲ ဆိုတာ သိတော့ ပျော်လိုက်တာ။ ခန့်မှန်းတာ မှန်လို့လေ။ ပန်ပန်ကလည်း အနီးကပ်ဆုံးဘလော့ဂါ ဖြစ်နေလို့.. အံ့သြကြ နဲ့။ မချစ်ကြည်အေး ကို မသက်ဝေ မိတ်ဆက်လာတော့ ၊ တခါတည်း တန်းသိနေပြန်ရော။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီတုန်းကလိုပဲ လန်းလန်းဆန်းဆန်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပြီးတော့ ရိုးရိုးသားသား စာတွေ ရေးချင်သေးတယ်။
khin oo may September 1, 2013 at 12:54 AM
ဟိ.တို့က မဂဇင်းတွေ မှာ ရေးဘို့အတွက် လက်ရည်မရှိလို့ ကိုယ်ရေးတတ်တာလေး ရေးနေတာပါ.။
khin oo may September 1, 2013 at 12:55 AM
အမှတ်တရ ကြီးရေးလို့ အားနာ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် တစ်ကယ်ပါ. သိတ်ချစ်တယ်ပေါ့ (ဟမ်)
ponyate September 1, 2013 at 4:11 AM
ခံစားချက် တူတူပဲ အစ်မ။ ပုံရိပ်လည်း ဟိုမရောက်ဒီမရောက် ခံစားချင် ဖြစ်နေတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဘလောက်ဂ်ပေါ် မတင်ဖြစ်တာက စာဖတ်တဲ့သူ နည်းလွန်းလို့။ (ဒါပေမယ့် အမြဲ လာဖတ်တဲ့ အစ်မတို့လို သူငယ်ချင်းတွေ ရှိနေတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်မိသေး။) ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရေးချင်လို့ ရေးမိနေတယ် ဆိုပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် စာဖတ်သူများများဆီကို ရောက်ဖို့ ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘလောက်ဂ်ရေးရင်း သူငယ်ချင်းတွေ တိုးလာကို ကျေနပ်မိပါတယ်။ Happy Blog Day အစ်မ။
နှင်းနဲ့မာယာ September 1, 2013 at 5:42 AM
အိတ်တွေ သွန်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် မမကို ကျေးဇူးပါလို့
ကြာလေ လက်နှေးလေးဖြစ်လာတာတော့ ဝန်ခံမိပါတယ်မမရယ်
ညီလင်းသစ် September 1, 2013 at 6:59 AM
ဘလော့ဂ်လောကကြီး ခြောက်သွေ့နေတာ အတော်ကြာကြာ ရှိနေရာကနေ ဟိုတစ်နေ့က အစ်မသက်ဝေရဲ့ အိတ် ပို့စ်တွေရယ်၊ အခုတစ်ခါ ကိုရန်အောင်က တိုက်တွန်းတဲ့ ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရ ပို့စ်တွေရယ်ကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေး ပြန်ဖြစ်လာတာကိုပဲ ကျနော့်မှာ ဝမ်းသာနေမိတယ်...၊း)
စာတွေ ပုံမှန်ပြန်ရေးဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုတာက တကယ့် သတင်းကောင်းပါပဲ..၊ ဘလော့ဂါ တကယ်ပီသတဲ့ အစ်မခင်ဦးမေ အပေါ် အစ်မသက်ဝေရဲ့ အမြင်နဲ့ ကျနော့်ရဲ့အမြင် တစ်ထပ်တည်း ပါပဲ၊း) ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ ကင်းပြီး လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ဘလော့ဂင်း နိုင်ပါစေကြောင်း ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျား....။း)
Khinaung Aye September 1, 2013 at 9:41 AM
ကိုယ်တိုင်က ဘလော့ဂါ တစ်ယောက်လို မဘလော့ဂင်းခဲ့ဖူးပေမယ့် ဘလော့ဂ်လောကနဲ့တော့ ယောင်တောင်ပေါင်တောင် ဆက်စပ်ဖူးပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် ကဗျာမရေးဖြစ်တာ ၇ နှစ်လောက်ကြာသွားရာက ကဗျာပြန်ရေးဖြစ်တာဟာ ဘလော့ဂါနဲ့ဘလော့ဂ်တွေနဲ့ကြောင့်ဆိုတာ အဖြောင့်အတိုင်း ၀န်ခံရမှာပါပဲ။ မနေ့ကနဲ့ဒီကနေ့မှာ ပထမဆုံး Kay Thwel ပြီးတော့ Pandora နဲ့ အခု သက်ဝေ တို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တွေကို ဖတ်ရတာဟာ ၂၀၀၉/၂၀၁၀/၂၀၁၁ ဘလော့ဂ်တွေ လည်ဖတ်ခဲ့တဲ့ ကာလတွေကို တကယ်ပဲ လွမ်းတသက်သက်ဖြစ်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သက်ဝေ က ဘလော့ဂ်မှာ စာမှန်မှန်ပြန်ရေးရင်း ဘလော့ဂါ၊ ဘလော့ဂင်း ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတာ သိရလို့ အထူးပဲ ကြိုဆိုပါတယ် (ပို့စ် တင်တိုင်း tag လုပ်ပေးဖို့ request လုပ်ပါတယ်) 'ဘလော့ဂါ တစ်ခေတ် ပြန်ဆန်းသစ်စို့' လို့ ကြွေးကြော်သံ ပြုရင်းနဲ့ပေ့ါ။ (အိတ်သွန်ဖာသွန် ငါးဆယ့်ခွန်)
rose of sharon September 1, 2013 at 10:56 AM
Sonata Cantata September 1, 2013 at 1:31 PM
ဘလော့ဂါ အသစ် တွေနဲ့ ရိုးရာမပျက် မိတ်ဆက်ပေးနိုင်တာ ချီးကျူးတယ်။
အနာရောဂါကင်း၍ အသက်ရှည်သူ သက်ဝေ ဖြစ်မည်... ဘလော့ဒေးတွင် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်သည်။
YeTun Photography September 1, 2013 at 1:37 PM
နိုင်နိုင်... လွတ်လပ်သော အနုပညာများ ဆက်လက်ဖေါ်ထုတ်နိုင်ပါစေ..စမ်းချောင်းလေး အဆက်မပြတ်စီးဆင်းနေသလို လှပစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ အားပေးလျှက်
Anonymous September 1, 2013 at 1:39 PM
အိမ်အိုဟောင်းကို... စွန့်သူ...မင်းရင်ထဲ...လွမ်းလှချည်ရဲ့ဆို...နေရာဟောင်းကို...မြန်သာပြန်ခဲ့ကွယ်... (ဒီသီချင်းလေး ဘာသာပြန်ဖြစ်အုံးမယ် ဒေါ်သက်ရေ...)
ညိုလေးနေ September 1, 2013 at 3:29 PM
Happy Belated Blog Day A Ma Thet Wai !
လသာည September 1, 2013 at 4:54 PM
မတွေ့ရတာ ကြာတော့ နေကောင်းလား အခုမှ မေးဖြစ်တော့မယ်။ စိတ်ဆိုးဘူးမို့လား :D
မမရေးထားတာဖတ်ပြီး ဘလော့ဂါရက်များကို တကယ်လွမ်းပါတယ်။
ညီမလည်း စိတ်သာ ရှိတာမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ထဲက ကိစ္စများမြောင် ဆိုသလို့ (အဲလေ :D) ကိုယ့်ဘလော့လည်း မရောက်။ သူများဆီလည်း မရောက်ဖြစ်နေရတာ။
မမ အရင်လို ပေပဲ ဘလော့မှာ စာတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆက်လက်ရေးနိုင်ပါစေလို့
ကြည်ဖြူပိုင် September 1, 2013 at 6:52 PM
ကိုလူထွေးတို့ကိုရွာသားတို့ရဲ့ပို့စ်လေးတွေမှာ ခင်မင်စရာဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ပါတတ်တဲ့ မမသက်ဝေနဲ့မမမိုးချိုသင်းရဲ့စာတွေကို အမြဲသွားဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာချစ်ခင်နေခဲ့တာကြာပါပြီ။ တခါတလေတော့ ကွန့်မန့်ရေးဖြစ်တယ်။ တခါတရံကျပြန်တော့ sign in ၀င်ပြီးသားမဟုတ်ရင် ပြန်ဝင်ရတာပျင်းတာနဲ့မရေးဖြစ်ပြန်ဘူး။ စာရေးပြီးရင် စာဖတ်သူမျှော်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ထဲထဲဝင်ဝင်ခံစားနားလည်တတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ တနေ့မှာ ၄ပုဒ်လောက်ဖတ်ဖြစ်ရင် ၁ပုဒ်မှာတော့ ခြေရာလေးချန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စာပိုဒ်တိုင်းမှာ ခြေရာမချန်ဖြစ်ပေမယ့် ဘလော့ဂ်ပို့စ်လေးတွေ ဖတ်ရတာကို ဖဘ နုတ်စ်တွေထက်ပိုကြိုက်လို့မကြာခဏ လာဖတ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဘလော့ဂင်းပြန်လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာမိကြောင်းပါမမ....ပျော်ရွှင်ပါစေ.....
Hmoo September 1, 2013 at 9:19 PM
လရိပ်အိမ် September 1, 2013 at 11:53 PM
အမှတ်တရ ရေးခဲ့ဆိုလို့ Happy Blog Day အမသက်ဝေ။
Happy Blogging Sis ..
ဟန်ကြည် September 2, 2013 at 3:13 AM
ဟုတ်တယ်...ပို့စ်ဖတ်ရင်း ပြန်စဉ်းစားမိတယ်...ရေးသက်ကလေးရလာတော့ သိပ်မရိုးသားချင်သလိုလို ဖြစ်လာတယ်...ပေါ့ပေါ့လေးတွေ ရေးမယ့်အစား ပြင်းပြင်းရှရှလေးတွေ ချချင်လာတယ်...တစ်နည်းပြောရရင် စိတ်ကြီးဝင်တာလို့ ဆိုလောက်ပေမယ့် ချစ်သောမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီး ဘလော့လားမြောက်လာတာလို့ပဲ ဆိုချင်တာပါပဲ...
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာက ဘလော့ကို အပျော်သဘောနဲ့ ရေးကြတာများပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဘလော့ကို စာရေးလေ့ကျင့်ကွင်းလို့ သဘောထားကြတာကိုး...ဒါကြောင့် ဘလော့ဂါ ဘာပဲတွေးတွေး ဘာပဲရေးရေး မြန်မာ့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ တရားပါတယ်...
ဆုမြတ်မိုး September 2, 2013 at 9:32 AM
ံHappy Blog Day ပါတီသက်ရယ်..ဆုမြတ်ဘလော့အသက်ဆက်အောင် အားဆေးပေးခဲ့တဲ့သူထဲက တစ်ယောက်မို့..အမြဲတမ်းအမှတ်တရကျေးဇူးတင်နေမှာပါ ။
မိုးငွေ့........ September 2, 2013 at 11:07 AM
happy belated blog day ပါ မမသက်ဝေ....တော်တော်များများရေးနေကြပီ ဆားချက်လိုက်ရကောင်းမလား ဟဲဟဲ
သက်ဝေ September 2, 2013 at 12:21 PM
ညီမ အိန်ဂျယ်... ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ...
ညီမ ဆွေလေး... အဲဒီ Control ဆိုတာကြီးကို ဖယ်နိုင်ဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေတယ်...း-)
အကိုအောင်သာငယ်... ဘလော့ပေါ်မှာ မတွေ့ရတာ ကြာလှပြီဖြစ်တဲ့ အကို့ ကော်မန့်အတွက် ကျေးဇူးတင် ၀မ်းသာ...း-)
ညီမကေ... ရိုးသား ရှင်းလင်း ပြီး သစ်လွင်လတ်ဆတ်တဲ့ စာတွေ ရေးနိုင်ဖို့ အတူတူ ကြိုးစားကြတာပေါ့နော်...
မမ ခင်ဦးမေ... မ ဟမ် ပါနဲ့... သိပ်ချစ်တယ်... တကယ်ပါ... <3
ညီမ ပုံရိပ်... ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ခံစားချက်ကို နားလည်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... :-)
နှင်း... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တတ်နိုင်သလောက် စာတွေ ဆက်ရေးကြတာပေါ့..
ကိုညီလင်း... အတူတူပဲ... အမလည်း စာရေးဖေါ်တွေဆီက ပိုစ့်အသစ်တွေ တန်းစီပြီး တက်လာတာမြင်တော့ တကယ်ဝမ်းသာနေတာ...
ဆရာ ကိုခင်အောင်အေး ရဲ့ ဖဘက ကော်မန့်ကို ကူးလာပေးတဲ့သူကို အရင် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်... ဟုတ်ကဲ့ ဘလော့ဂါ တစ်ခေတ် တကယ်ပဲ ပြန်ဆန်းသစ်ချင်လှပါတယ်...း-)
သက်ဝေ September 2, 2013 at 12:33 PM
Rose... ညိုလေး... စင်စင်... လရိပ်အိမ်... Happy Blog Day ပါ...
သူငယ်ချင်း သီတာ... လောလောဆယ်မှာ ကောင်းကောင်း နေမကောင်းလို့ သီတာ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေလို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းမိပါတယ်...
ကိုရဲထွန်း... အသိအမှတ်ပြု အားပေးမှုအတွက် သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...း-)
ကိုနတ်... နေရာဟောင်းကို...မြန်သာပြန်ခဲ့ကွယ်... (မျှော်နေမယ်...)
ညီမ လသာည... စိတ်မဆိုးပါဘူး ခုလို တခါတခါ ပေါ်လာပါအုံး... အဟိ
ညီမ ကြည်ဖြူပိုင်... အမကလည်း ချစ်စရာ ညီမတယောက်ကို စိတ်ထဲက ရင်းနှီးနေပြီးသားပါ... စာတွေလာဖတ် မှတ်ချက်ရေးခဲ့တာ အမြဲ ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်...
Mr. Hmoo လည်း ပျော်ရွှင်ပါစေ... :P
ဆရာကိုဟန်ကြည်... စာရေးသက်ကလေး ရလာတဲ့သူတိုင်း ဒီခံစားချက်ကို နားလည်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်... ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော ဘလော့ဒေးဖြစ်ပါစေ...
ညီမ ဆုမြတ်... အမကလည်း ညီမတို့ အားပေးမှုတွေအတွက် အမြဲ ကျေးဇူးတင် အမှတ်ရနေမှာပါ...
ညီမ မိုးငွေ့... ဒါ ဆားချက်တာ မဟုတ်ဘူးလေ... ရေးကို ရေးရမှာ... It'samust... ပိုစ့် အသစ် မျှော်နေမယ်...
အခုလို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ကြသူများ အားလုံးနဲ့အတူ လာလည် စာဖတ်သွားကြသူများ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူး အကြီးကြီး တင်ရှိပါကြောင်း...း-)
ရွှေအိမ်စည် September 2, 2013 at 1:27 PM
အို သူသူ့ ဘလော့ဂ်လေးကိုလည်း ကြေညာပေးထားတာပါလား..။
ကျေးဇူးပါ မမသက်ဝေ :))
စာရေးသားခြင်းကို တစ်ခုခုက ထိန်းချုပ်ထားသလိုပဲဆိုတာကို နားလည်မိတယ်...။
တကယ်တော့ မမရယ်...ဘလော့ဂ်ရေးလိုက်ရတာ စိတ်ကို ဘယ်လောက် ပေါ့ပါးမြူးသွက်စေသလဲဆိုတာ တကယ့်လက်တွေပါပဲ...။
စာပေအနုပညာတွေနဲ့ မွမ်းမံတည်ဆောက်နေရတဲ့ စာရေးဆရာတွေ စိတ်ဝိညာဉ်တောင် အဲလိုပေါ့ပါးမှုမျိုး ရပါ့မလားပဲ....။
တစ်ခုခုဆို ဘလော့ဂ်မှာမတင်သေးဘဲ..ဆိုတာမျိုး မကြာခဏကြားမိတယ် မမ...။
ဒါဟာ ကောင်းခြင်းလား ဆိုးခြင်းလား..သေချာ မဆန်းးစစ်တတ်ပေမယ့်
မမလည်း စာတွေ အများကြီးရေးနိုင်ပါစေ
ရွှေအိမ်စည် September 2, 2013 at 1:38 PM
ဒါနဲ့ မီး ရဲ့ “ရှားတားပါးတား အိတ်မှောက်ထား” ခေါင်းစဉ်လေးထားပစ်ခဲ့တယ်..ဗြဲ
သများကတော့ သူတဂ်လို့ ရေးရတာကို :D
Adora etc. September 2, 2013 at 6:29 PM
မမသက်ဝေ ပြီးခဲ့တဲ့ weekendက အလုပ်တွေရှုတ်၊ အရှုတ်တွေလုပ်နေတာနဲ့ ခုမှ လာနှုတ်ဆက်ရတယ်။
Happy Blog Day နော်။ဖဘနဲ့ Blogနဲ့ မတူပါဘူး မရေ။ စာကောင်းကောင်းလေးတွေ ဖတ်ချင်ရင် Blog တွေကိုပဲပြေးပြေးလာရတယ်။
WeSheMe ကစပြီး Blogတွေဖတ်လာတာ၊ မပန်ဒိုရာနဲ့ မကေရဲ့ ကဗျာတွေ စာညွှန်းတွေလဲကြိုက်၊ ဆရာမမေငြိမ်းရဲ့ စာတွေဆိုလဲ မလွတ်၊ မမိုးချိုသင်းနဲ့ တီတီsweeet ရဲ့ စာတွေဖတ်ပြီး တခိခိရီ.. အခုကြ မချစ်ကြည်အေးရဲ့ မမသက်ဝေရဲ့ စာတွေမှာ ထမင်းမဲ့ဟင်းမေ့၊ ကိုညီလင်းရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရယ် သားလေးနဲ့မအိမ်သူအကြောင်းရယ် သွားသွားခိုးကြည့်။ မလေးရဲ့ မိတောကိုလဲမလွတ် ဆရာဟန်ကြည်ရဲ့ မြန်မာစာရေးဟန်တွေလဲ ကြိတ်အတုခိုးနဲ့။ Blog တွေမရှိရင် ဘယ်လိုနေရမှန်းတောင်မသိဘူး
တန်ခူး September 3, 2013 at 5:09 AM
Happy belated blog day thet wai! သက်ဝေရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဆိုတဲ့ ရင်ဖွင့်သံလေးကို သဘောကျမိတယ်. စာရေးကောင်းသူတယောက်မို့ အဲဒီလို ဒွိဟလေးတွေရှိနေတာလို့ ထင်မိပါတယ်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာရေးသူရဲ့စေတနာပဲမဟုတ်လား.
စာဖတ်သူတွေ ဘလော့အဖတ်နည်းလာတယ်ဆိုတာ ဘလော့ရေးတဲ့သူတွေသိတ်မရေးတော့လို့လဲပါမယ်ထင်ပါတယ်
စာဖတ်သူတယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘလော့တွေလိုက်ချောင်းရတာလဲအမောပါပဲ ချောင်းတိုင်းလဲ အသစ်မတွေ့တော့ မသွားဖြစ်တော့ဘူး
မေ့လောက်မှတခါ အသစ်တင်တော့ စာဖတ်သူကလဲ မသိတော့ဘူး
mabaydar September 3, 2013 at 5:15 PM
အစ်မရေ... ရေးတော့မယ်ဆိုလက်မရဲတော့ သလိုဖြစ်တာ... စရေးခါစကလို မဟုတ်ပဲ control လုပ်ရင်းနဲ့ ဘလော့ပေါ်ရောက်မလာတော့တဲ့ ပိုစ့်လေးတွေ မဗေဒါဆို ပုံနေပြီ... ခုဆို စာလုံးပေါင်းပါမနည်း သတိထားရေးရတော့မယ်ဆိုတော့ (ကိုယ်လိုစားလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို သွားကြည့်ဖို့ ပျင်းတဲ့သူအတွက်) ချမရေးဖြစ်တော့ဘူး...
ဒါတောင် အစ်မတို့လို မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ မရေးဖူးသေးလို့... ဖေ့ဘွတ်တွေပေါ်လဲ ဘလော့ကို ပိုချစ်ပါတယ်... လာဖတ်တဲ့သူ အရင်လောက်မရှိတော့လဲ ကိုယ်ရေးနိုင်သလောက်တော့ ရေးနေအုံးမယ်... ဟိုးအရင် ဘလော့တွေစပေါ်ခါစကလည်း လူတွေသိပ်မလာခင် ဘလော့ဂါချင်းချင်းပဲ အားပေးနေခဲ့ကြတာပဲ... :D
မြသွေးနီ September 3, 2013 at 5:25 PM
မြသွေးကွန်မန့်က နောက်ဆုံးဘိတ်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘလော့ဒေးမတိုင်မီ အိတ်မှောက်ထားတာမို့ နောက်ဆုံးဘိတ် အိတ်နဲ့လွယ်တယ်လို့ သဘောထားပေးပါနော်။ အစ်မသက်ဝေပို့စ်လေးက ဘလော့ကို ဘယ်လောက်ခင်တွယ်တယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်စေသလို၊ ဘလော့ဂါတွေကို ဘယ်လောက်ခင်တွယ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေတယ်။ ကွန်မန့်တွေကလဲ ဖတ်ရင်း ကြည်နူးမိရပါတယ်။ ဘလေ့ာဂါဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဘ၀ကို အမြဲတန်ဘိုးထားလျှက်ပါ။
San Htun September 5, 2013 at 2:28 AM
အစ်မသက်ဝေဆီ မှန်မှန်လာဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် ကွန့် မန့်ချန်မထားဖြစ်ဘူးရယ်...အိတ်မှောက်သွန်ဖြိုး နှစ်ဆယ့်ကိုး တဂ်ပို့ စ်မှာ အစ်မသက်ဝေဆီက ကွန့် မန့် ရတော့ ပျော်လိုက်တာ...
စာတွေ အများကြီး ရေးပြီး ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေ...
ရင်လှိုင်းခတ်သံ September 5, 2013 at 11:34 PM
မမသက် ရင်လှိုင်း ဘလော့လေးကို မိတ်ဆက်ပေးထားလို့ ကျေးကျေးပါ...။ တဂ်ပို့ စ်လေးကို လည်း ကြိုးစားပြီး ရေးပါ့မယ်..။
Ma Tint September 19, 2013 at 10:59 PM
Happy Belated Blog Day !!!
အဆင်မပြေတဲ့ အဝေးတစ်နေရာကို ရောက်နေတာမို့ ဘလော့ဒေးတောင် အများနည်းတူ ပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်မရခဲ့ဘူး မသက်ရေ... ဒီကနေ့တော့ လည်ပတ်ခွင့်ရတုန်း ပို့စ်တွေလိုက်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ မသက်ရဲ့ အိတ်သွန်ဖာမှောက်အကြွေးလဲ အခုထိတိုင် ဆပ်ခွင့်မရသေးဘူးကွယ် ...